စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ - App စတိုး | Telenor Myanmar
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ - App စတိုး
ဒီသဘောတူညီချက်မှာ Telenor App Store (the "Service") ၏ ‘သုံးစွဲသူ’ ဖြစ်တဲ့သင့်ရဲ့ ရယူခွင့်နှင့် အသုံးပြုမှုူတို့ကိုဆုံးဖြတ်သော အထွေထွေအခြေအနေများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ပေါင်းစည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁.၁ Telenor App Store တစ်နှစ်စာဝန်ဆောင်မှုသည် အပတ်စဉ်(သို့) နေ့စဉ် အရစ်ကျ ငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူများထံ (Android App)အမ်းဒရိုက်အက်ပ်ပုံစံဖြင့်ပေးပို့ပေးမည့့် နည်းပညာအချက်အလက် အကြာင်အရာများကို စာရင်းပေးသွင်းပြီးရယူနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
၁.၁.၁ ပါ၀င်သောအကြောင်းအရာများကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲခြင်းနှင့် သုံးစွဲခြင်းတို့အတွက့် ကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ။ အခကြေးငွေပေးထားတဲ့သုံးစွဲသူအပေါ်မှာ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်သောအရေအတွက် ကန့်သတ်ချက်များမထားရှိပါ။ တစ်ခုတည်းသောကန့်သတ်ချက်မှာ သုံးစွဲသူ၏ဖုန်းထဲတွင်ထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ ဒေတာသိုလှောင်မှှုပမာဏသာဖြစ်ပါသည်။
၁.၂ Telenor App Store မှဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်သည့်နည်းပညာအချက်အလက်များမှာ အခြားသော ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ များမှပြုလုပ်ထားသောကြောင့် Telenor Myanmar မူပိုင်ခွင့် ကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထိုအချက် ကြောင့် Telenor Myanmar မှ အန်းဒရိုက်အက်ပလီကေးရှင်းများ ရဲ့ မှန်ကန်မှု၊ ကောင်းမွန်စွာ လည် ပတ်နိုင် မှု၊ သင့်လျော်မှုများအပြင် ထိုအချက်အလက်များကို အသုံးပြု နေစဉ်တွင် သုံးစွဲသူမှဆုံးဖြတ်ချက်ချ သောလုပ် ဆောင် မှုများအပေါ်တွင် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
၁.၃ Telenor App Store ထဲမှ အက်ပလီကေးရှင်းများကို ဒေါင်းလုဒ်ရယူပြီးအသုံးပြုရန် အန်းဒရိုက် နည်းပညာနဲ့ကိုက်ညီပြီး အန်းဒရိုက်ဗားရှင်း၂.၃ သို့မဟုတ် ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ဗားရှင်းတစ်ခုထည့်သွင်းထားသောမိုဘိုင်းဖုန်းတစ်ခုလိုအပ်တယ်ဆိုသည်ကို သုံးစွဲသူအနေဖြင့်သိရှိနားလည်ရပါမည်။
၁.၃.၁ သုံးစွဲသူအနေနဲ့ Telenor App Store ကိုအသုံးပြုရန် (WIFI, GPRS, EDGE, 3G, 4G သို့မဟုတ်) အခြားသောအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုများလိုအပ်သည်ကိုသိရှိနားလည်ရပါမည်။ အင်တာနက်မရှိပဲသုံးစွဲမှုများအတွက် အင်တာနက် သုံးစွဲကာ အသုံးပြုရန် မလိုသော အက်ပလီကေးရှင်း ငါး(၅) ခုသာထည့် သွင်းပြီးကန့် သတ်ထားပါတယ်။
၁.၄ စာရင်းပေးသွင်းချိန်တွင် သုံးစွဲနိုင်ရန်လိုအပ်ချက်များနှင့် သုံးစွဲသူရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေစာရင်းပေးသွင်းလိုက်သည်နှင့် ကျသင့်ငွေအားလုံးကိုပေးအပ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိ နားလည် ပြီး သဘောတူရပါမည်။ သုံးစွဲသူဘက်မှကိုက်ညီသုံးစွဲနိုင်သည့် မိုဘိုင်းဖုန်းမရှိခြင်း ကြောင့် ၀န်ဆောင်မှု များကို ရပ်တန့််လိုပါက Telenor Myanmar မှကျသင့်ငွေကို သုံးစွဲသူထံပြန်လည် ပေးဆောင်ခြင်း များရှိလာ မည် မဟုတ်ပါ။
၁.၅ ၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုကာ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရယူ ရန်အတွက် အင်တာနက်ဒေတာ သုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သတ် ပြီး ကျသင့်ငွေများကို သုံးစွဲသူရဲ့ မိုဘိုင်းအင်တာနက် ဖြန့်ဝေသူတို့မှသတ်မှတ်ထားသည့် သင့်လျှှော်သော ငွေကြေး ပမာဏကိုသာ ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ Telenor Myanmar သည််သုံးစွဲသူ၏ ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်သော ဒေတာကုန်ကျမှုများကို ကုမ္ပဏီ ၏ လွတ်လပ်သော သဘော ဆန္ဒဖြင့် ယာယီ ကင်းလွတ်ခွင့် ပြု နိုင်ပြီး ထို ကင်းလွတ်မှု များ ကို မည်သည့် အချိန်၌မဆို ရပ်ဆိုင်းနိုင်မည်ကိုသုံးစွဲသူအနေနဲ့သိရှိနားလည်ရပါမည်။
သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ဒေတာအခမဲ့သုံးစွဲခွင့်အား အပြည့်အဝခံစားခွင့်ရရှိနိုင်ရန် Chrome Browsers အားအသုံးပြုရာတွင် ‘Data Saver’ အား ဖြုတ်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ပိုမိုအဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုလိုပါက ‘Opera Mini Browser’ အားအသုံးပြုသင့်ကြောင်း သိရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
၁.၆ စာရင်းပေးသွင်းသည့် သုံးစွဲသူမှာ ၀န်ဆောင်မှုများကို ရယူရန် တရားဝင်သက်မှတ်ထားသောအ သက် အရွယ် ဖြစ်ရမည် သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူ၏ ခွင့်ပြုချက်ရှိရပါမည်။
၁.၆.၁ ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်း(သို့မဟုတ်)တစ်စုံတစ်ယောက်မှဝယ်ယူသည့်အခါတိုင်း၊အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာတာဝန်တွေဟာ အဆိုပါတစ်စုံတစ်ယောက်ကို ၀န်ဆောင်မှုနှင့်အသုံးပြုဝယ်ယူမှုတို့အတွက်ခွင့်ပြုချက်ပေးထားသည်လို့ယူဆရတဲ့သက်ဆိုင်သောမိုဘိုင်းအင်တာနက်ဖြန့်ဝေသူများကိုအခကြေးငွေပေးအပ်ရသူ၏အပေါ်မှာရှိပါတယ်။ မသင့်တော်သော၊မလိုလားအပ်သောနည်းလမ်းများဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုများ အက်ပလီကေးရှင်း များကိုအသုံးပြုခြင်းအပေါ်တွင် Telenor Myanmar မှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူ(သို့) သဘောတူညီချက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူဘက်မှသာလျှင် ၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန် လိုအပ်သည့်မိုဘိုင်းဖုန်းကို ထိန်းသိမ်း ရန်တာဝန်ရှိပါသည်။
၁.၇ Telenor Myanmar ဘက်မှနေပြီးသုံးစွဲသူ၏ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုများအဆင်မပြေဖြစ်မှု၊ အက်ပလီကေးရှင်း များကို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ပြီးအသုံးပြုရာတွင်အခြားသော ဟာ့ဝဲ (Hardware) များ (Software) ဆော့ဖ်ဝဲများအသုံးပြုခြင်း (သို့)၀န်ဆောင်မှုအတွက်အခြားသောနေရာမှရှိနိုင်သည့် အင်တာနက်လင့်ခ် များရှိနေမှု တို့ကိုတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။Telenor Myanmar ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု မှာသုံးစွဲသူ၏ လိုအပ်ချက် များ(သို့)အခြားသောလိုအပ်မှုများပြည့်စုံနိုင်မည်ဆိုပြီးအာမခံချက်(သို့)အတည်ပြုမှုမရှိခြင်းကိုသုံးစွဲသူမှသိရှိထားရပါမည်။
၁.၈ အခြားသော ဆော့ဗ်ဝဲရေးသူ များမှထုတ်လုပ်ထားသော အက်ပလီကေးရှင်း များတွင်ပါရှိ သည့်ဝန်ဆောင်မှု(သို့) ပေါ်တယ်များမှတစ်ဆင့်ထည့်သွင်းထားသည့်ကြော်ငြာမှုများ(သို့) ခေါင်းစည်းကြော်ငြာ များ၊ ဝင်းဒိုးနေရာအသစ်ဖြင့်ကြော်ငြာမှုများတို့ကဲ့သို့ကြော်ငြာများနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များပါရှိနေမှုကို Telenor Myanmar မှ တာဝန်ယူခြင်းမရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များ အတွက် တာဝန်သည် ကြော်ငြာသူ(သို့)တရားဝင်သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွင်သာလျှင်တာဝန်ရှိသည်။
၁.၉ ထိုဝန်ဆောင်မှု၏ သဘောသဘာဝအတိုင်းဝန်ဆောင်မှုသည် အမှားကင်းစင်ကြောင်း၊ အနှောက် အယှက် မရှိနိုင် ကြောင်း ကို Telenor Myanmar မှအာမ မခံပါ။
၁.၁၀ ဤစည်းကမ်းများနှင့် ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုအတုပြုလုပ်ထားသော ဝက်ဘ်ဆိုက် (websites)အတုများနှင့် ပေါ်တယ် (portal) များကိုသုံးစွဲမိသောကြောင့်ဖြစ်လာသော နစ်နာမှုများ(သို့) ဆုံးရှံူးမှုများကို Telenor Myanmar မှ တာဝန်မယူပါ။
၁.၁၁ အောက်ပါအချက်များကြောင့်ဖြစ်လာသောဆုံးရှုံးမှု၊ထိခိုက်မှုများကို Telenor Myanmar မှ မည်သည့် အကြောင်း အရာကြောင့်မှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
(၂) တစ်ကိုယ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမျှဝေခြင်း
၁.၁၂ အောက်ပါအချက်များကြောင့်ကျသင့်ခဲ့တဲ့အခကြေးငွေများကို Telenor Myanmar ဘက်မှပြန်လည် ပေးဆောင်ခြင်းပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။
(၁) သုံးစွဲသူနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကြားထဲမှ ဟာ့ဝဲ ပိုင်း နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲ ပိုင်းများကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း
(၂) သုံးစွဲသူရဲ့ဖုန်းက အက်ပလီကေးရှင်း များကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ရန်အရည်အသွေးမပြည့်မှီခြင်း
(၄) ၀န်ဆောင်မှုရဲ့ ပေါ်တယ် များ ဝက်ဘ်ဆိုက် များမှာဖတ်ရှူနိုင်သော ညွှန်ကြားချက် နည်းလမ်းများနှင့် စည်းကမ်းများကို မဖတ်ရှူခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောပြဿနာများ
(၅) မယုံကြည်မှုများ/ အလွဲသုံးစားပြုလုပ်မှုများ
(၆) ၀န်ဆောင်မှုရယူပြီးနောက်သုံးစွဲသူဘက်မှပြန်လည် ပယ်ဖျက် လိုမှု များ နှင့် ပြန် ထွက်လိုခြင်း
၁.၁၃ အခြား စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များ တွင် အာမခံချက်များမပါသည့် သို့မဟုတ် ယခုလက်ရှိတင်ပြထားသော အခြေအနေ အခက်အလက်များ တွင် ကွဲပြားခြား နားစွာ ဖေါ်ပြ မထားသည့် ၀န်ဆောင်မှု များ ကို သုံးစွဲသူ အနေ အသုံး ပြုရန် သင့်တော် သော် လည်း အတိအလင်းတင် ပြပြီး ဖြစ်သော ဤဝန်ဆောင်မှု ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များ ကို လေ့ လာ ပြီး သတ်မှတ် ချက် များ နှင့် အညီ အသုံး ပြုရန် မှာ သုံးစွဲသူ ၏တာဝန်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ဤဝန်ဆောင်မှု အတွက် ရရှိနိုင်သော အကြောင်းအရာ နှင့် အချက်အလက်များ ကို တယ်လီနော ၏ သဘောဆန္ဒ အတိုင်း သတ်မှတ် ဆုံးဖြတ် မည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အကြောင်းအရာ အချက်အလက် များ ၏ အရည်အသွေး၊ တိကျမှု ၊ ယုံကြည်ရမှု ၊ သတင်းအချက်အလက်၊ အယူအဆ၊ ကြေညာချက် များ နှင့် ကြော်ငြာ များ အတွက်မှု ထို အချက် အလက် အကြောင်းအရာ များ ၏ ပိုင်ရှင်က သာ တာဝန်ယူ မည် ဖြစ်ပါသည်။
၁.၁၄။ အဆိုပါ အပလီကေးရှင်းစတိုး အတွင်းရှိ အပ်ပလီကှေးရှင်းများ၊ အကြောင်းအရာ အချက် အလက်များ ကို အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်း ခြင်း များ ရှိပါက ထိုကဲ့ သို့ ပြောင်းလဲ လိုက်ခြင်း ရုပ်သိမ်းပယ်ဖျက် လိုက်ခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာ နိုင်သော အကျိုး ဆက်များ အတွက် တယ်လီနော မြန်မာ က တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။ ဤဝန်ဆောင်မှု များ အတွင်း ထိုကဲ့ သို့ အပြောင်း အလဲ ပြုလုပ်ခြင်း ပျက်ဖျက်ခြင်း များ ကို ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိကြောင်းကို သုံးစွဲသူအနေ ဖြင့် သိရှိသဘော တူ ကြောင်း အတည် ပြုပါသည်။
၂.၁ သုံးဆွဲသူများအနေနဲ့ဤဝန်ဆောင်မှုရှိအက်ပလီကေးရှင်းများကို သုံးစွဲသည်ဖြစ်စေ၊ မသုံးစွဲသည်ဖြစ်စေ စာရင်းပေးသွင်းထားသူအဖြစ်ရှိနေသရွေ့ကာလပတ်လုံး အပတ်စဉ် ၄၂၀ကျပ် အား သုံးစွဲသူ၏ဖုန်းဘေလ်မှ ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂.၁.၁. ကြိုတင်ငွေရှင်းထားတဲ့စာရင်းပေးသွင်းထားသူများအတွက် သုံးစွဲမှုကာလ တစ်ပတ်တာအတွက် ၄၂၀ မြန်မာကျပ်ငွေ (ကုန်သွယ်ခွန်ပါဝင်ပြီး) ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။
၂.၂ Telenor Myanmar ရဲ့စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များမှတဆင့်စာရင်းပေးသွင်းသူများကိုလဖြတ်နှင့်ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပြီးသို့မဟုတ်စာပိုဒ်၂.၁ မှာဖော်ပြထားသလို ကြိုတင်ငွေဖြည့်သွင်းထားသည့်အထဲမှအပြည့်အဝကောက်ခံသွားပါမည်။ ကောက်ခံမှုကိုလဖြတ်နဲ့သော်လည်းကောင်းကောက်ခံသည့်စက်ဝိုင်းအတွင်းသုံးစွဲသူ၏အခကြေးငွေပေးဆောင်သည့်အပတ်ရေအပေါ်မှုတည်ပြီးလည်းကောင်း ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂.၄. စျေးနှုန်းများမှာကြိုတင်သတိပေးခြင်းမရှိပဲပြောင်းလဲသွားနိုင်ပြီး ၀ယ်ယူနိုင်သည့်နေရာအပေါ်မှုတည်ပြီးစျေးနှုန်းများပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများထဲတွင်ပြောင်းလဲသွားသည့် ဝန်ဆောင်မှု ၏စျေးနှုန်းများကို သုံးစွဲသူထံဝယ်ယူချိန်တွင်ပြန်လည်အသိပေးမည်ဖြစ်သည်။
(၂) မိုဘိုင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်
၄.၁ သုံးစွဲသူအနေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုအောက်ပါနေရာများမှပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။ ။
(၁) အက်ပလီကေးရှင်း (သို့) ဝက်ဘ်ဆိုက် ထဲမှ ‘My Account’ နေရာကိုဝင်ပြီး ‘Unsubscribe’ ခုလုတ်ကိုနိုပ်ခြင်းဖြင့်
(၂) Telenor App Store မှပို့သည့် မတ်ဆေ့ များမှ unsubscribe link သို့ ၀င်ကာ ‘Yes’ ခုလုတ်ကိုနိုပ်ခြင်းဖြင့်
၄.၁.၁ ၀န်ဆောင်မှုကိုပယ်ဖျက်သည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့်ရယူထားသော အက်ပလီကေးရှင်း များကို သုံးစွဲခွင့် မရှိတော့ပါ။
၄.၂ ပယ်ဖျက်ကြေးကောက်ခံခြင်းမရှိပဲပယ်ဖျက်ချိန်မှာကျသင့်နေသည့် ပုံမှန်စာရင်းပေးသွင်းကြေးများကို သုံးစွဲသူထံမှ ဆက်လက်ကောက်ခံသွားပါမည်။
၄.၃ သုံးစွဲသူက အသုံးပြုမှု ပယ်ဖျက်ရန်အတွက် အထက်ဖေါ်ပြပါ နည်းလမ်းများ အတိုင်း မပြုလုပ်သရွေ့ အသုံး ပြုရန် စာရင်းပေးသွင်းထား မှုမှာ အလို အလျောက် ဆက်လက် တည်ရှိပြီး အသစ် တဖန် စာရင်းသွင်း မှု ဖြစ်ပေါ် နေမည် ဖြစ်ပါသည်။
၄.၄ သုံးစွဲသူမှမမှန်မကန်၊မဖြောင့်မတ်သောနည်းလမ်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါက Telenor Myanmar မှကြိုတင်သတိပေးခြင်း၊လျှော်ကြေးငွေပြန်လည်ပေးဆောင်ခြင်းမရှိပဲဝန်ဆောင်မှုကိုအချိန်မရွေးရပ်တန့်ပိုင်ခွင့်၊ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
၅.၁ အားလုံးသောအချက်အလက်များကို ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ တရားမ အခွင့် အရေး ဥပဒေ နှင့် ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှု အခွင့် အရေး ဥပဒေ များ အပါအဝင် အခြား သော ဥပဒေများနှင့် အသိဉာဏပစ္စည်း ဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှု ကာကွယ်ရေးဥပဒေများနှင့်ပါ ကာကွယ်ထားပြီး အခွင့်ရှိသော ပိုင်ရှင်များ က လိုင်စင် ထုတ်ပေးသော စနစ်ဖြင့် စျေးကွက်တင် ရောင်ချ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၅.၂ Telenor Myanmar နှင့်ပူးပေါင်းထားသော စီးပွားဘက်များမှအခြားသော မိုဘိုင်း အက်ပလီကေးရှင်း အပြင် Telenor Myanmar မှပိုင်ဆိုင်သော အမှတ်တံဆိပ် များနှင့်အခြားသောထုတ်လုပ်သူများမှဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် Telenor Myanmar ထံကိုလိုင်စင်တင်ထားသောပစ္စည်းများကိုဝင်ရောက်သုံးစွဲခြင်းဖြင့်သုံးစွဲသူမှအသိပညာဆိုင်ရာနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများကိုလိုက်နာပြီးသက်ဆိုင်ကြောင်းလက်ခံရပါမည်။သုံးစွဲသူဖြစ်သည့်အလျှောက်ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့်ရရှိထားသောအချက်အလက်များဖြစ်သောနာမည်များ၊ခေါင်းစဉ်များ၊စကားလုံးများ၊ဆောင်ပုဒ်များ၊အမှတ်တံဆိပ်များထင်ရှားသော ကုန်သွယ်မှုအမှတ်တံဆိပ်များနှင့် အခြားသောအနုစိပ်အလုပ်များကို သုံးစွဲသူမှမပိုင်ဆိုင် ကြောင်းသိရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅.၃ သင့်မှာအထူးသီးသန့် မဟုတ်သော၊ ကူးပြောင်းခြင်း မရရှိနိုင်ပြီး အချိန်မရွေးရုပ်သိမ်းနိုင်တဲ့ အချက်အလက်များကို လက်ရှိ တရားဥပဒေနှင့် အညီသုံးစွဲနိုင်ခွင့် လိုင်စင်တစ်ခုကို ရရှိမှာဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုမှရရှိသည့် အချက်အလက်များကို တစ်ပိုင်း တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ၊ အကုန်လုံးဖြစ်စေ ပြောင်းလဲစေခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း၊ ပြောင်းပြန်ပြင် ဆင်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ဖြန့်ဝေခြင်းတို့တွင်ပါ၀င်ခြင်း၊ခိုးချခြင်းများမပြုလုပ်ရပါ။
၅.၄ သင်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်သုံးစွဲမှုသည် ကာကွယ်ထားသောအချက်အလက်အများကိုခွင့်ပြုချက်များနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အသုံးပြုမှုများအတွက်ခံစားပိုင်ခွင့်ပေးအပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အထူးသဖြင့်အချက်အလက်များထဲမှပိုင်ဆိုင်မှုရပိုင်ခွင့်များ၊ မှတ်ချက်များကိုဖျက်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်။ မူပိုင်ခွင့်ရှိသူနှင့် Telenor Myanmar ၏ရေးသားထား သောခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ အချက်အလက်များ ကိုအခြားသောနည်းလမ်းများနှင့် အသုံးမပြုရ၊ သင့်တကိုယ်ရည်သုံးရန်ကာကွယ်ထားသောအချက်အလက်များကိုသာ အသုံးပြုနိုင်မည်။Telenor Myanmar သို့မဟုတ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုင်စင်ပိုင်ဆိုင်သူများ ၏ အသိပညာဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် ဖော်ပြထား ရှိသည့်စည်းမျဉ်းစည်း ကမ်းများအတိုင်းသုံးစွဲခြင်း အပြင် မည်သည့်ခွင်ပြုချက်မှသင့်ကိုမပေးထားပါ။
၅.၅ သုံးစွဲသူနှင့်အခြားသောသူများကြားထဲမှဝန်ဆောင်မှုသုံးဆွဲမှုအပေါ်အငြင်းပွားမှုများကို Telenor Myanmar မှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ တခြားသောသူများနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများကို သင်မှအကုန်တာဝန်ယူပြီး ထိုငြင်းခုံမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်ပြောဆိုချက်များ၊ တောင်းဆိုချက်များနှင့်ထိခိုက်မှုများကို Telenor Myanmar နှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ကြောင်း သိရှိလက်ခံနိုင်ရမည်။
၆.၁ ၀န်ဆောင်မှုကိုသုံးစွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုကြိုတင်အသိပေးထားခြင်းမရှိပဲ မည်သည့်အချိန်မဆို ပြောင်းလဲခွင့်ထပ်တိုးပိုင်ခွင့်ကို Telenor Myanmar မှပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
၆.၂ Telenor Myanmar မှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှ ပေါ်ထွန်းလာသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊ တာဝန်များကို စည်းကမ်းတင်းကျပ်စွာလိုက်နာခွင့်များကိုတောင်းဆိုရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက မည်သည့်အချိန်မဆို သူတို၏ပြောင်းလဲနိုင်ခွင့်ကို စွန့်လွှတ်ရန်လိုအပ်မည်မဟုတ်ပါ။
၆.၃ ဒီဖော်ပြမှုရဲ့သက်ဆိုင်ရာအချက်တွေကိုအသုံးမဝင်ခြင်း၊ အတည်မပြုခြင်း၊ တရားမဝင်ခြင်း၊ ရှောင်ကျဉ်ခြင်းတို့ဖြစ်လာပါက သို့မဟုတ် မည်သည့်နည်းနဲ့မှတရားဝင်ဆုံးဖြတ််နိုင်စွမ်းမရှိပါက ထိုဆုံးဖြတ်ချက်များကကျန်ရှိသောဖော်ပြမှုများ၏အသုံးဝင်မှု၊ မဝင်မှုကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိပဲ မူလအတိုင်းရှိနေပါမည်။
၆.၄ ဒီသဘောတူညီချက်ထဲမှာမဖော်ပြထားတဲ့ပြဿနာများ အပေါ် Telenor Myanmar မှသာလျှင် အပြီးသတ် ့ဆုံးဖြတ် ၊ ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပါမည်။
၆.၅ TelenorMyanmar မှဝက်ဘ်ဆိုက်များ ပေါ်တယ်များမှတဆင့် ပေးအပ်ထားသော ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုချင်းစီနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး သက်ဆိုင်ရာ ၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များ အသီးသီးရှိပါသည်။ ၀န်ဆောင်မှုထဲဝင်ရောက်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း ပြု ပါက လက်ရှိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်းကို သေချာစွာဖတ်ရှူပြီး သဘောတူညီကြောင်းအတည်ပြုခြင်း အထမြောက်ပါမည်။
Customer များအတွက် Telenor Myanmar ရဲ့ တရားဝင် Facebook Page မှအသင့်ရှိနေပါသည်။ မေးခွန်းများအတွက် message ပို့ပြီး မေးနိုင်သလို ၉၇၉ သို့ လည်း နံနက် ၆ နာရီမှ ည ၁၁ နာရီ အတွင်းဖုန်းဆက်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
အခြားသိလိုသည်များရှိပါက care@telenor.com.mm မှ တဆင့်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။